Rio de Janeiro - I LOVE RIO- CONTACT
Thumela us umlayezo
Abamele yethu friendly kwamakhasimende sizibophezele ukuphendula yonke imibuzo yakho futhi behlangana yimuphi udinga ungase ube. Singathanda ukuzwa kuwe! Sicela ugcwalise ifomu elingezansi ukuze singase bakusize.
Igama lakho: *
Thola uthintene nathi
Siyojabula ukuphendula noma imiphi imibuzo ongase ube mayelanaRio de Janeiro, travel, isiko, noma ibhizinisi.
Samukela ukubambisana kanye ezenziwa ngokubambisana nezinkampani kanye nezinhlangano emhlabeni jikelele.
Izintatheli wamukelekile ukuba asibuze izibuyekezo noma ulwazi mayelana nanoma yiziphi izenzakalo zamanje.
Thina zingakhiqiza eliphezulu-oda ekhethekile izithombe noma amavidyo ukusetshenziswa omagazini siko noma izincwadi.
Omunye abameleli bethu ngeke aphendule udaba lwakho ngokushesha ngangokunokwenzeka.
Sicela uvumele okungenani amahora 24 ukutjhentjha isikhathi, ngoMsombuluko kuze kube uLwesihlanu.
A isethuloRio de Janeiro with a social, cultural and historical interpretation of all the aspects that make the city the beautiful and unique gem that it is today.
portal kuyingxenye I LOVE RIO iphothifoliyo kwemikhiqizo, ngamunye usebenzisa indlela ehlukile ukukhuthaza image kanye isiko Rio de Janeiro.